हिम्मतिला उद्योगी हेमराज ढकाल - corporatekhabar : Nepals first corporate news magazine and portal
हिम्मतिला उद्योगी हेमराज ढकाल
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘इन’ लेखिएको ढोकामा देशलाई धारे हात लगाउँदै विदेशको यात्रा गर्नेको लाइन निकै लामो देखिन्छ । तर, ‘आउट’ लेखिएको ढोकाबाट ‘देशमै केही गर्छु’ भनेर फर्किने बिरलै भेटिन्छ । शिक्षा र अनुभवका लागि त्यही ढोकाबाट ‘इन’ भएका हेमराज ढकाल देशमै केही गर्न ‘आउट’ भएका व्यक्ति हुन् । जसले अहिले एक सफल उद्योगीको पहिचान मात्रै बनाएका छैनन्, सयौंलाई देशमै रोजगारी दिइरहेका छन् । देशमै केही गर्न चाहनेका लागि उदाहरण समेत भएका छन् ।
ढकालको जन्म भोजपुरको याकुविर्तामा भएको हो । ढकालका हजुरबा बडाहाकिम थिए भने बुवा लक्ष्मण प्रसाद ढकाल राजनीतिमा लागेर प्रधानपञ्चसम्म भए । ढकाल परिवारको बसाइँ भोजपुरमा धेरै भएपनि खेतिपाति झापामा पनि थियो । उनी पढ्न झापा झरे, पछि भारत र उच्च शिक्षा अष्ट्रेलियाबाट लिए ।
अष्ट्रेलियामा अन्डरग्य्राजुएट गरेपछि जापान पुगे । जहाँ उनका केही साथीहरु थिए । जापानमा उनले इन्साइकोपिडिया ब्रिटाननिका नामकोे डिक्सनरी प्रकाशित गर्ने कम्पनीमा ९ महिना मार्केेटिङ अफिसरका रुपमा काम गरे । उनी भविष्यमा आफ्नै व्यवसाय स्थापित गर्न अनुभव हासिल गरिरहेका थिए त्यहाँ । जापानबाट त्यसको सुरुवात गर्न चाहे । राम्रै आम्दानी रहेको उक्त जागिर छाडेर नेपालबाट ह्यान्डिक्राफ्ट जापान लैजाने र त्यहाँबाट सेकेन्डह्यान्ड गाडी नेपाल ल्याउने काम गरे । त्यसरी गाडी संस्थागत रुपमा नेपाल भित्र्याउने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् ।
कलंकीमा सोरुम राखेर उक्त व्यवसाय उनले सन् १९९३ देखि १९९८ सम्म उनको उक्त व्यवसाय चल्यो । त्यसपछि उनले जापानिजसँग मिलेर ‘जापान अटो टेक्नो’ नामक सर्भिस सेन्टरको सुरुवात गरे । त्यो एक तहसम्म सञ्चालन गरे भाइभतिजालाई जिम्मा लगाएर उनी आफ्नो सपनाको व्यवसाय चिया बगानतिर लागे ।
मर्मत सम्भार सम्बन्धि प्याकेजमा सर्भिस दिन जापनीजसँग मिलेर जापानिज अटो टेक्नो सूरु गरें । त्यो पनि भाइभतिजालाई जिम्मा लगाएर उनी झापा चिया बगान गर्न गएँ ।
सन् २००३ मा उनले डेढदुई सय विगाह जमिनमा चियाबगान सुरु गरे । चियाबगान व्यवसाय पारिवारिक जस्तो पनि थियो, त्यसैलाई बढाउँदै लगेका हुन् उनले । चिया बगानमा लगानी गर्नुको कारण उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘चिया बगान हेर्दा सुन्दर देखिने । अरुको बगान देख्दा आफ्नो पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहना जाग्थ्यो पहिलेदेखि नै । परिवार र छिमेकीको जमिन पनि थियो । त्यसैलाई उपयोग गरेर चिया बगान बनाइयो ।’ झापा टि स्टेटका रुपमा रहेको उनले चियाबगान गर्नुका अरु कारण इकोसिस्टम मेन्टेन, रोजगारी पनि सिर्जना, मौलिक उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड समेत हो ।
त्यहीँ रहँदा क्षेत्रीय तहको विकास बैंक एक्सल विकास बैंक सुरु गरे । जसको उनी अहिले पनि अध्यक्ष छन् । ‘बैंकतिर भने मलाई माहोलले तानेको हो । त्यो समय बैंक सञ्चालन गर्न धेरै पूँजी नचाहिने भएपछि साथीभाई मिलेर सुरु गरेका हौं,’ उनले भने ।
उनले त्यसपछि एक साथीको सहकार्यमा नेपालमै ‘हेरिटेज’ ब्रान्डको म्याट्रेस कम्पनी खोले । कलंकीमा रहेको जापान अटो टेक्नो तिनकुने सारेर त्यहीँ सुरु गरेका हुन् । जुन म्याट्रेसमा नेपालकै पहिलो उत्पादन भयो । उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यो सयम ग्राहकलाई यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर समेत सिकाउनुपथ्र्यो ।’
यहीँ उत्पादन सुरु गर्नको कारण छ उनले । भन्छन्, ‘त्यसअघि भारतबाट ल्याएर यहाँ बेचिन्थ्यो । यत्रो पैसा विदेश गइरहेको छ । यतै किन नगर्ने भनेर गरें । पारिवारिक वातावरण पनि औद्योगिक भएकाले मलाई सहयोग भयो ।’
संसारभरको प्रविधि उस्तै भएकाले यहीँ उत्पादन गर्दा गुणस्तर राम्रो रहेको उनी बताउँछन् । उनले सुरुवातमा मिटरमा दुई सय घटाएर मार्केटिङ गरेका थिए । उनलाई लागेको थियो, ‘यसलाई नेपालमा सफल बनाएँ भने कम से कम कार्पेटका क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।’ नेपालमा बनाउँदा उनीसँग जोखिम ‘चल्छ कि चल्दैन’ भन्नेमा थियो । तर, उनी नेपालमै बनेको कार्पेटप्रति नेपालीलाई विश्वास दिलाउन सफल भए ।
त्यसपछि उनी फर्निसिङ ब्रान्डमा गए । हेरिटेज फ्लोरिङ कार्पेट भनेर २०११ तिर सुरु गरेका हुन् । त्यसपछि यसैको बाइप्रोडेक्ट इपिइ रोल एन्ड सिटको सुरुवात गरे । यसरी उद्योग सुरु गर्दै तिनलाई सफलतासम्म पु¥याउन नेतृत्व गर्दै गए । अहिले उनी यी सवैको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
आफ्नै प्रगतिमा मात्रै रमाउने स्वभावका व्यक्ति होइनन् ढकाल । उनी देशको अर्थव्यवस्थामा व्यक्तिगत र सामाजिक रुपमा टेवा दिन खोजिरहेका हुन्छन् । यसक्रममा उनले विभिन्न संघ÷संस्थाको नेतृत्व गर्दै आफ्नो ‘भिजन’ समेत अन्य उद्यमी र देशका निम्ति दिएकमा छन् ।
उनी यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका कार्यकारी सदस्य र त्यसैको कृषि उद्यम केन्द्रका सह–अध्यक्ष छन् । कृषि उद्यममा उनी विशेष केन्द्रीत छन् । किनभने कुनै समय जापानमा उनले काम गर्दा उनका जापानिज साथीहरु भन्थे, ‘तिमीहरुको देशको भविष्य छ । किनकि तिमीहरुसँग प्रशस्त भर्जिन ल्यान्ड छ । विश्वलाई ठूलो समस्या खानाको हुने हो । त्यो तिमीहरु उत्पादन हुन्छ ।’
उनलाई त्यहीबेला लागेको हो, कृषि उद्योगमा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने । अहिले पनि उनी व्यवसायिक कृषि फार्ममा उनले जोड दिइरहन्छन् । उनले चिया उत्पादन संघ र किसान संघको नेतृत्व गर्दा नेपाल कृषिमा केन्द्रीत हुनुपर्ने थप कारण र सम्भावना बुझ्ने मौका पाए । उनी भनछन्, ‘कृषि क्षेत्रका सेमिनार र गोष्ठिमा जाँदा मैले अझै धेरै कुरा जानें ।’
कृषिमा उनको लगाव र अनुभव देखेर उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले उनलाई कृषि उद्यम केन्द्रकी सह–अध्यक्ष प्रस्ताव गरिन् । उनले त्यसलाई स्वीकारे । त्यहाँ रहेर उनी कृषिकेन्द्रीत नीति निर्माणमा लबिइङ गरिरहेका हुन्छन् । सरकार र दातृ निकायको कोष ल्याएर कृषि उद्यममा लाग्न चाहनेलाई उद्यमी बनाउन सघाउछन् । उनी भन्छन्, ‘देशको अर्थतन्त्रको स्तर उकास्ने हो भने व्यवसायिक खेती गर्न जरुरी छ ।’
नेपालमा व्यवसायिक खेतिका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चक्लाबन्दी जग्गा देखेका छन् । उर्बर भूमि बाँडिदै स–सानो टुक्रामा वर्गीकरण हुँदा उत्पादन घटेको उनले बुझेका छन् । यसको विकल्पन पनि उनले देखेका छन्, ‘सरकारसँग सवै प्रदेशमा ४०÷ ५० हेक्टर जग्गा छ । तीमध्ये खोलाका किनार र कुकाठ हुने ठाउँ धेरै छन् । तिनीहरुलाई सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा राखेर भाडामा दिने नीति लिनुपर्छ ।’
त्यसो गर्दा व्यवसायिक खेति गर्नका लागि लगानी भित्रिन्छ । लगानीसँगै प्रविधि र नयाँ औजार समेत समेत भित्रिने उनको बुझाइ छ । तर, कृषि प्रधान देश भनेर पनि यसमा सरकारको प्राथमिकता नहुनु समस्याका रुपमा दर्शाउँछन् ।
स्थानीयका समस्या स्थानीय रुपमा समाधान गर्न सरकार अहिले स्थानीय तहको अवधारणामा संघीयता कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसमा कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिलेलाई कम से कम पनि हरेक स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोरेज खोलिदिनुप¥यो । किसानले आफ्नो सामान जम्मा गर्ने र ग्राहक खोजेर बेच्न सक्ने होस्,’ उनी भन्छन् । यसैगरी बजार व्यवस्थित गर्नका लागि कृषि तथा फलफूल केन्द्र जरुरी देखेका छन् ।
यसैगरी प्रदेशमा कृषि औजार केन्द्र एक–एक वटा हुन जरुरी देखेका छन् । रसायनिक मल नेपालमै उत्पादन सुरु गरेर कृषकलाई सहुलियतमा दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कृषि रोड अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ । ‘मेचीको महाकाली पु¥याउन भन्दा भारतको उत्पादन सस्तो पर्छ । यहाँको उत्पादन यहीँ उपभोग गराउनका लागि कृषि करिडोर जस्तो बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । रसायन राखेको फलफूल खाइरहेका नेपालको हिमालमा अग्र्यानिक फलफूल सडिरहेको विषयमा सरकारले चासो दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यसैगरी कृषिमा ‘वन डोर पोलिसी’ जरुरी देखेका छन् । यसबाहेक कृषि नीतिलाई समय सापेक्ष परिवर्तन जरुरी उनले देखेका छन् । कृषि उद्योग भन्नेवित्तिकै थप २५ प्रतिशत कर लगाउन नहुने उनको तर्क छ । कृषिको प्रोसेसिङ युनिटलाई पनि कृषि सरह नै लिइनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले नेपालको भूमिमध्ये २९ प्रतिशतमा कृषि छ । बन ४३ प्रतिशत छ । तर, बनबाट अपेक्षित आम्दानी नेपालले लिन नसकेको उनी बताउँछन् । त्यसैले उनी भन्छन्, ‘बनको समुचित प्रयोग गरौं । कृषिमा जोड दिउँ ।’
प्रकाशित : २१ पुष २०७५, शनिबार
नेपालमा बिरामीको मृत्युमाथि व्यवसाय गर्ने ग्याङ छन्
पुराना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सके पर्यटन क्षेत्र अझै फस्टाउँछ
हरियो बनलाई नेपालको धन बनाउन सकिएको छैन
योगले सफल बनाउँछ व्यवसायमा
ईमान्दार व्यापारीको कोटीमा पर्ने डा. रुपज्योती माथि किन पर्यो बज्रपात ?(उज्जवल जंग शाह/सरोज ओझा )